Nahatratra ambaratonga vaovao ny fahafatesan'ny zava-mahadomelina tafahoatra: 100,000 tamin'ny taona lasa tany Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nahatratra ambaratonga vaovao ny fahafatesan'ny zava-mahadomelina tafahoatra: 100,000 tamin'ny taona lasa tany Etazonia
Araka ny angon-drakitra vaovao avy amin'ny Foibe Fanaraha-maso ny Aretina, dia nihoatra ny 100,000 ny fahafatesan'ny fanafody tafahoatra any Etazonia tao anatin'ny 12 volana voalohany. Nitombo 29% ny isan'ny maty noho ny fatrany tamin'ny taon-dasa. Heverina ho vonjimaika ny angon-drakitra fa mpamantatra ny ho asehon'ny isa farany.
Ny manam-pahaizana dia mihevitra fa ny valan'aretina dia nandray anjara tamin'ny fitomboan'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fahafatesana, saingy hatramin'izao dia tsy misy porofo marim-pototra. Ny ambaran’ny manampahaizana anefa dia ny fanabeazana mialoha sy ny fisorohana no zava-dehibe amin’ny famerenana ny fironana.
Candor, izay manome fampianarana momba ny fahasalamana momba ny zava-mahadomelina sy ny firaisana ara-nofo ho an'ny mpianatra ao amin'ny kilasy faha-4 ka hatramin'ny faha-8, dia nanatsara ny votoatiny fanabeazana momba ny zava-mahadomelina ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny. Ny fandaharam-pianarana 'Science Behind Drugs' dia mivoatra hatrany mba hamahana ny fironana amin'ny fampiasana sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Mino i Candor fa ny fandraisana anjara amin'ny ray aman-dreny amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny zanany momba ny zava-mahadomelina sy ny fahasalamana ara-pananahana dia mitarika amin'ny safidy mahasalama.
Torohevitra ho an'ny ray aman-dreny
• Aoka ianao ho mora hatonina ary manomboka resaka – Ny resaka ao anaty fiara dia mety ho toerana tsara hiresahana kokoa – ary tsy ampy ny miresaka izany indray mandeha
• Mampiasà tantaram-baovao hanombohana resadresaka - Rehefa misy zavatra mifandraika amin'ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny overdosing ao amin'ny vaovao, ampiasao izany hanombohana ny resaka.
• Zarao ny soatoavinao sy ny zavatra antenainao- Ny antony #1 milaza ny ankizy fa tsy misotro toaka sy zava-mahadomelina hafa dia satria ho diso fanantenana ny ray aman-dreniny.
• Mametraka fitsipika mazava – Ny fametrahana fitsipika mazava sy voafaritra no fototry ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny amin'ny fisorohana. Mamorona fitsipika miaraka amin'ny zanakao ary ampiharo izany tsy tapaka.
• Manara-maso ny fanafody – Zava-dehibe ny fanariana fanafody ara-potoana.
• Amboary ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka – Miara-misakafo rehefa azonao atao ary esory ny fitaovana elektronika amin'ny sakafo, ny efitrano fatoriana ary ny hetsika ataon'ny fianakaviana. Mahaliana ny mahaliana ny zanakao.
• Fantaro ny namany – Tandremo ny olona miaraka amin'ny zanakao ary manararaotra mampahafantatra ny tenanao amin'ny ray aman-dreniny. Aoka ianao ho lalan'izy ireo.
• Ampahafantaro ny zanakao fa afaka miantso anao izy amin'ny fotoana rehetra mba ho tonga haka azy na rehefa ao anatin'ny faneren'ny namana. Afaka mampiasa anao ho fialan-tsiny foana izy ireo.
Calzone and Pizza: A Dynamic Duo Janoary 24, 2022